चीनद्वारा केही अमेरिकी सामानमा कर छुट, वार्ताको वातावरण बन्ला ? « Khasokhas
चीनद्वारा केही अमेरिकी सामानमा कर छुट, वार्ताको वातावरण बन्ला ?
बेइजिङ, एएफपी/ चीनले अमेरिकासँग चाँडै गर्न लागेको व्यापार वार्ताअघि १६ किसिमका अमेरिकी सामानमा लगाइरहेको करमा छुट गरेको घोषणा गरेको छ । दुबै देशबीच अर्को महिना व्यापार वार्ता हुँदैछ ।
अहिलेसम्म १४ सयमा कोरोना भाइरस संक्रमण, चीनबाहिरमात्र ३८ जनामा, कुन देशमा कति ?
खतरनाक कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनबाहिर पनि तीब्र गतिमा फैलिइरहेको छ । अहिलेसम्म चीनबाहिरमात्र ३८ जनामा
झण्डै दुई दशकदेखि क्यानडाको मस्ट वाण्डटेड सुचीमा रहेका पार्थासार्थी कपुर अमेरिकामा पक्राउ परेका छन् ।